Generallọ Ọgwụ General nke Ndị Agha Nnwere Onwe nke Ndị Mmadụ - Shenzhen Doneax Science and Technology CO., LTD
General Hospital nke ndi mmadu
E hiwere Hospitallọ Ọgwụ General nke ndị mmadụ na nnwere onwe agha (PLAGH) na 1953, ọ mepụtara onwe ya ka ọ bụrụ nnukwu ụlọ ọgwụ ọgbara ọhụrụ nke nwere ọtụtụ ọkachamara ọkachamara, usoro ọzụzụ niile, ngwa ọrụ ọgbara ọhụrụ na akara pụrụ iche, n'okpuru n'okpuru. ndị ọrụ nkwonkwo nkwado jikọrọ ọnụ nke ndị agha nnwere onwe nke ndị China. Lọọgwụ ahụ bụ ebe nlekọta ahụike dị mkpa maka ndị ọrụ si n’aka gọọmentị etiti. Ọ bụ ọrụ maka nlekọta ahụike nke ọrụ ndị agha, isi ụlọ ọrụ na ngalaba ndị ọzọ, nlekọta ahụike maka ndị isi na ndị agha, inyefe maka ịgwọ ọrịa maka ọrụ ndị agha dị iche iche, nyocha na ọgwụgwọ ọrịa ndị na-adịghị mma. Thelọ ọgwụ a bụkwa ụlọ akwụkwọ ọgwụ nke ndị mmadụ nnwere onwe. Ihe nkuzi ya bu akwukwo nke gụsịrị akwukwo. Ọ bụ naanị ngalaba nkuzi nke ụlọ ọgwụ na-elekọta ndị agha niile.
Dabere na ozi dị na webụsaịtị gọọmentị nke ụlọ ọgwụ ahụ na Disemba 2015, na ụlọ ọgwụ, enwere ngalaba ngalaba ahụike 165 na ngalaba ahụike, ngalaba 233 nọọsụ, ngalaba ngalaba mba 8, ụlọ nyocha mba mba 1, mpaghara mpaghara 20 na ọkwa minista na agha-larịị isi laboratori, 33 agha pụrụ iche ọgwụ emmepe na nnyocha institutes, akpụ 13 ọkachamara uru ji mbara nchoputa na ọgwụgwọ. N'otu oge ahụ, ọ bụ ntọala ngosipụta kpụ ọkụ n'ọnụ maka ndị agha niile na ebe ọzụzụ nke Chinese Nursing Society. E nwere ụlọ ọgwụ na mba ahụike ahụike, na-enye ọrụ nlekọta ahụike dị elu. Kwa afọ, ihe karịrị nde ndị ọrịa 4.9 chọrọ ọgwụgwọ mberede ga-abịa ngalaba ụlọ ọgwụ nke ụlọ ọgwụ. E wezụga nke ahụ, ọ na-anabata mmadụ 198,000 kwa afọ, a na-arụkwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90,000.
Hospitallọ ọgwụ ahụ nwere ndị ọkà mmụta 5 nke Academylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Injinia nke China, ihe karịrị 100 ndị ọkachamara na nkà na ụzụ karịa ọkwa 3, na ihe karịrị ndị ọkachamara 1,000 na ndị ọrụ nchịkwa na-enweta Mmụta Ọzụzụ Kasị Elu. Lọ ọgwụ ahụ emeriwo ihe karịrị onyinye 1,300 sayensị na teknụzụ rụzuru na ma ọ bụ karịa ọkwa mpaghara na nke minista, gụnyere ihe nrite mbụ nke 7 maka ọganihu sayensị na teknụzụ mba, ihe nrite nke abụọ 20, ihe nrite mba 2, na ihe nrite mbụ nke 21 maka ndị agha sayensị na nkà na ụzụ ọganihu.
Dị ka ozi dị na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ụlọ ọgwụ na Disemba 2015, ụlọ ọgwụ nwere ngalaba nlekọta ahụike 165 na ọgwụ na ngalaba 233 nọọsụ. Enwere ụlọ ọgwụ na ahụ ike mba ụwa iji nye mgbochi na nlekọta ahụike dị elu.
Nkà mmụta sayensị nyocha
Dabere na ozi dị na webụsaịtị gọọmentị nke ụlọ ọgwụ ahụ na Disemba 2015: N'ụlọ ọgwụ ahụ, enwere laabuo isi mba 1, ụlọ nyocha abụọ dị mkpa nke Mịnịstrị nke mmụta, ụlọ nyocha labo isi nke 9 nke Beijing, ụlọ nyocha nke isi 12 nke ọgwụ ndị agha, mba 1. ụlọ ọgwụ na-eme nnyocha na nkà mmụta ọgwụ, na ụlọ ọrụ nyocha nke mba ụwa 1, na-akpụ uru ndị ọkachamara 13 na-egosipụta nyocha na ọgwụgwọ zuru ezu.
Dabere na ozi dị na webụsaịtị gọọmentị nke ụlọ ọgwụ ahụ na Disemba 2015: Thelọ ọgwụ a akwadola isi akwụkwọ iri abụọ na atọ nke sayensị na teknụzụ ndị China, yana SCI gụnyere otu akwụkwọ akụkọ.